ချင်းပြည်နယ် – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကာလ ရခိုင်မြောက်ပိုင်း လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ဖို့ တောင်းဆို
ပြည်တွင်း လေကြောင်းလိုင်း ၂ လိုင်း လိုင်စင်ရုပ်သိမ်း
အာဆင်နယ်အသင်းကို ၂၂ နှစ်ကြာကိုင်တွယ်ခဲ့ခြင်းက အကြီးဆုံးအမှားပါလို့ ၀န်ခံလိုက်တဲ့ အာစင်ဝင်းဂါး
ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရုရှခြေထိုးမှု ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သမ္မတ ထရမ့်က ပြင်ဆင်ပြောပြန်
၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ခုနှစ် ပညာသင်​နှစ်​ တက္ကသိုလ်​ဝင်စာ​မေးပွဲတွင်​ ထူးချွန်​စွာ​ အောင်​မြင်သော ​ကျောင်းသား​ကျောင်းသူနှင့် ဆရာ/ဆရာမများအား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနား
မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ ဇေယျာသီရိပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ တက်ရောက်ကူညီစိုက်ပျိုးပေးခဲ့
ယနေ့ (18-7-2018)(0930) အချိန် ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) မိုင်းရယ်မြို့နယ် ပြည်ည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ခုနှစ် ပညာသင်​နှစ်​ တက္ကသိုလ်​ဝင်တမ်းစာ​မေးပွဲတွင်​ ထူးချွန်​စွာ​ …
ဇူုလိုင် ၊ ၁၈ ဇေယျာသီရိမြို့နယ် ကျည်တောင်အုပ်စု ကျည်တောင်ခေါမရွာတွင် (၁၈.၇. ၂၀၁၈) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ကျေးရွာ အ.ထ.က (၁၆) စာသင်ကျောင်းက …
ဘီးလင်း၊​ ဇူလိုင်​ ၁၇ သတင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ရှုရန်
ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ လပတ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်
17-7-2018 မွန်ပြည်နယ် ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရုံးခန်းမ၌ ဇူလိုင် (၁၇) ရက်နေ့ (၁၁း၀၀) အချိန်တွင် လပတ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်အရန်ပါတီကော်မတီဝင် ဦးသံဒိုင်မှ …
ရှမ်းပြည်​နယ်​( အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ပြည်နယ်ပါတီဥက္ကဌနှင့်​​တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ရှမ်းပြည်​နယ်​(အ​ရှေ့ပိုင်း)၊ တာချီလိတ်​ပြည်​ခိုင်​ဖြိုးပါတီရုံးတွင်​ ယနေ့ (၁၈.၇. ၂၀၁၈) ရက်​​နေ့ နံနက်​ပိုင်းတွင်​​ ရှမ်းပြည်​နယ်​ပါတီဥက္ကဌ ဦးစိုင်းသန်းဝင်းနှင့်ေ​တွ့ဆုံပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပရာ အခမ်းအနားသို့ ပြည်​နယ်​အတွင်း​ရေးမှူးနှင့် ပြည်​နယ်​​ကော်​မတီဝင်​များ၊ …
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးပါတီ ချင်းပြည်နယ် မင်း တပ်ခရိုင်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ခရိုင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီလုပ်ငန်းညှိ နှိုင်းအစည်းအဝေး (၁/၂ဝ၁၆)ကို ယခုလ၅ရက်နံနက်၈နာရီ၌ကျင်းပရာ ခရိုင်ပါတီနာယက ဦးဟာရှိန်းဘွေ (အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်ဟောင်း)၊ခရိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအုန်းလွင် (ချင်းပြည်နယ်လွှတ် တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်း)နှင့် အတွင်းရေးမှူး ဦးငိုင်းကီး၊ ဦးနိန်း နိုင်(ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်ဟောင်း)၊ ခရိုင်ကော်မတီဝင် များ၊မင်းတပ်မြို့နယ်၊ကန်ပက်လက် မြို့နယ်၊ မတူပီမြို့နယ်နှင့်ပလက်ဝ မြို့နယ်တို့မှပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌ များ၊ အတွင်းရေးမှူးများ ၊ဘဏ္ဍာ ရေးမှူးများနှင့်ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ စုစုပေါင်း ၂ဝ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အာဆင်နယ်နည်းပြဟောင်း အာစင်ဝင်းဂါးက သူ့ဘ၀အတွက်အကြီးမားဆုံးအမှားက အာဆင်နယ်အသင်းကို ၂၂ နှစ်ကြာ ကိုင်တွယ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို အလွန်အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာကောင်းစွာ ၀န်ခံသွားခဲ့ပါတယ်။ အာစင်ဝင်းဂါးဟာ အာဆင်နယ်အသင်းကို ၂၂ နှစ်ကြာကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား ၃ကြိမ်၊ …
၂၀၂၀ အိုလံပစ် ခြေစစ် အမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အာရှဇုန် ခြေစစ်ပွဲအတွက် အုပ်စုများမဲခွဲပွဲကို လာမယ့် သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့ မနက် (၁၁း၀၀)နာရီမှာ ကျင်းပ သွားတော့မှာပါ။ …